बामदेव गौतमलाई फेरि धो’का हुने, बिष्णु पौडेललाई सरकारले च्याप्दै… – PathivaraOnline
Home > समाचार > बामदेव गौतमलाई फेरि धो’का हुने, बिष्णु पौडेललाई सरकारले च्याप्दै…
admin October 1, 2020 समाचार	0
काठमाण्डौ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई फेरि धो’का हुने भएको छ । एकातिर उनको मु’द्दा अदालतमा बिचाराधीन छ भने अर्कातिर प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासचिव बिष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने तयारी थालेका छन् । श्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभोलि नै अर्थमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । समाचार आजकाे अनलाइनहरूमा छापिएकाे छ।
यसको लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि परामर्श गरेका छन् । अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले नयाँ अर्थमन्त्रीको रूपमा महासचिव विष्णु पौडेललाई ल्याउने सहमति गरेको स्रोतको दाबी छ । बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा लगिएपछि उनको अर्थमन्त्रीमा चर्चा चुलिएको थियो । तर, उनलाई अदालती प्रकृयामा अल्झाएर यता नयाँ मन्त्रीलाई सपथ खुवाउने तयारी गरेका छन् ।
पछिल्लो समय पार्टीभित्र आफूविरुद्ध घे रा ब न्दी हुँदापनि पौडेलले ओलीलाई राम्रो साथ दिएका थिए । ओलीले मात्रै होईन, अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने ग्रिन सिग्नल दिएका छन् । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडामार्फत नै अर्थमन्त्रालय चलाउन खोजेको चर्चा चलेको थियो ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि राजदूतमा ब्यवस्थापन गरेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडामार्फत नै अर्थमन्त्रालय चलाउन खोजेको चर्चा चलेको थियो । तर, खतिवडालाई अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिश गरेपछि ओलीले नयाँ अर्थमन्त्री तत्काल नियुक्त गर्न लागेका छन् ।
महासचिव पौडेल ओलीका प्रिय नेता हुन् । ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । पछिल्लो समय पार्टीभित्र आफूविरुद्ध घे रा ब न्दी हुँदापनि पौडेलले ओलीलाई राम्रो साथ दिएका थिए । ओलीले मात्रै होईन, अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने ग्रिन सिग्नल दिएका छन् । नेकपाभित्र यतिवेला मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनको लागि छलफल चलिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी अध्यक्षद्धय ओली र दाहालले पाएका छन् ।
विश्वकै छोटो बैवाहिक जीवन, बिवाह भएको जग्गेबाटै सम्ब’न्ध बि’च्छे’द, चकित पार्ने यस्तो छ कारण!
पेट पाल्न लकडाउन छल्दै, प्लास्टिक उठाउँदै
ए’सिड आ’क्रम’णकारीलाई गो’ली ठो’क्नुस र भन्नुस न’क्कली भनेकाे सक्कली परेछः इ. बिद्या बराल (भिडियो सहित)